သူ့ရဲ့အိမ်မက်တစ်ခုကို အကောင်အထည်ဖော်နိုင်တော့မှာဖြစ်လို့ ၀မ်းသာပျော်ရွှင်နေတဲ့ ဥက္ကာမင်းမောင် – Cele Posts
သူ့ရဲ့အိမ်မက်တစ်ခုကို အကောင်အထည်ဖော်နိုင်တော့မှာဖြစ်လို့ ၀မ်းသာပျော်ရွှင်နေတဲ့ ဥက္ကာမင်းမောင်
သူ့ရဲ့အိမ်မက်တစ်ခုကို အကောင်အထည် ဖော်နိုင်တော့မှာဖြစ်လို့ ၀မ်းသာပျော်ရွှင်နေတဲ့ ဥက္ကာမင်းမောင်
ပရိသတ်ကြီးရေ.. အနုပညာ လောကမှာ ပရိသတ် အခိုင်အမာနဲ့ အောင်မြင်မှုတွေ များစွာ ရရှိထားတဲ့ သရုပ်ဆောင် ဥက္ကာမင်းမောင် ကတော့ ဇာတ်ကားတွေလည်း ရိုက်ကူးထား တာဖြစ်ပြီး လက်ရှိမှာတော့ New York မှာ အခြေချနေထိုင်နေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်..။အနုပညာ အလုပ်တွေရပ်နား ထားပေမယ့်လည်း ပရိသတ်တွေ ဆက်လက် အားပေး ချစ်ခင်နေကြတဲ့ ဥက္ကာမင်းမောင် ကတော့ ဝါသနာပါတဲ့ အိပ်မက်တွေထဲက တစ်ခုအကောင်အထည် ဖော်ဖို့အတွက် လမ်းသစ်တစ်ခုကို လျှောက်လှမ်းနေ တဲ့အကြောင်း ပြောပြလာတာ ဖြစ်ပါတယ်..။
ဥက္ကာမင်းမောင် ကတော့ Music နဲ့ ပတ်သတ်ရင် အကောင်းဆုံးကျောင်းတွေ ထဲကတခုဖြစ်တဲ့ New York က သူ အရမ်းတက်ချင်တဲ့ SAE institute မှာ Audio Engineering degree တက်ဖို့ ကျောင်းဝင်ခွင့်ရပြီး အစစအရာရာ အဆင်ပြေစွာနဲ့ စတက်လို့ရပြီဖြစ်တဲ့အကြောင်း ပြောပြလာတာပါ..။မသေခင်မှာ ဖြစ်ချင်တာတွေနဲ့ ဝါသနာ ပါတာတွေကို အကုန်ဖန်တီးယူသွားနိုင်တဲ့ လူတစ်ယောက်ဖြစ်ချင်သလို ဝါသနာပါတာကို လေ့လာ သင်ယူရမှာကြောင့် အရမ်း စိတ်လှုပ်ရှားတဲ့အကြောင်းကိုလည်း ပြောပြထား ပါသေးတယ်..။
“New York က Music နဲ့ပတ်သတ်ရင် အကောင်းဆုံး ကျောင်းတွေထဲကတခု ဖြစ်တဲ့ SAE institute မှာ Audio Engineering degree တက်ဖို့ ကျောင်းဝင်ခွင့်ရပြီး အစစအရာရာ အဆင်ပြေစွာနဲ့ စတက်လို့ရပါပြီ.. ကမ္ဘာ့နိုင်ငံပေါင်းများစွာမှာလည်း ဒီကျောင်းရှိပါတယ်.. အရမ်းတက်ချင်နေခဲ့သော ကျောင်း တချိန်က ကြိုးစား ခဲ့ပေမယ့် အကြောင်းကြောင်းပေါင်းများစွာနဲ့ အဆင်မပြေခဲ့ဘူး.. ဒီလိုနဲ့ပဲ နှစ်တွေကြာ.. အခုကျတော့လဲ ချောချောမောမောပဲ အဆင်ပြေသွားတယ်.. ကိုယ့်အလုပ်ချိန်တွေ နဲ့လဲ လွတ်တယ်..
ဟိုးအရင် green card မရခင် international student အနေနဲ့ကျွန်တော်လည်း ကျောင်း လခက အပြည့်ပေးရတာ မတတ်နိုင်ဘူးလေ.. အဲ့အချိန် မိဘက ပိုက်ဆံထုတ်ပေးခဲ့တာဆိုတော့လဲ သူတို့တက်စေချင်ခဲ့တဲ့ Business management major ပဲတက်ခဲ့ပြီးဘွဲ့ရခဲ့တာ.. ကို ယ် ဝါသနာပါတာကို မတက် ခဲ့ရဘူး.. US citizen နဲ့ permanant resident တွေအတွက်ကကျောင်းလခက international student အနေနဲ့ယှဉ်ရင် အများကြီး သက်သာသလို financial aid လည်း လျှောက်လို့ရတယ်..
အခုတော့ ကိုယ်ဝါသနာပါ တာလေးကို လေ့လာ သင်ယူရမှာဆိုတော့ အရမ်း excited ဖြစ်တယ်..DJ တစ်ယောက်လည်း ဖြစ်ချင်တယ်.. ဘဝ မှာ မသေခင် ကိုယ်ဖြစ်ချင်တာတွေ ကိုယ်ဝါသနာ ပါတာတွေကို အကုန် ဖန်တီးယူသွားတဲ့ လူတစ်ယောက်လည်း ဖြစ်ခဲ့ချင်သေးတယ်.. အိပ်မက်တွေ ထဲက အိမ်မက်တခု အကောင် အထည်ဖော်ဖို့ အတွက် လမ်းသစ်လေးတခု စလျှောက်ခြင်း နိဒါန်းပေါ့…” ဆိုပြီး ဥက္ကာမင်းမောင်က ပြောပြထားတာပါ..။
Source: Okkar Min Maung’s Fb Acc
သူ့ရဲ့အိမျမကျတဈခုကို အကောငျအထညျ ဖျောနိုငျတော့မှာဖွဈလို့ ဝမျးသာပြျောရှငျနတေဲ့ ဥက်ကာမငျးမောငျ
ပရိသတျကွီးရေ.. အနုပညာ လောကမှာ ပရိသတျ အခိုငျအမာနဲ့ အောငျမွငျမှုတှေ မြားစှာ ရရှိထားတဲ့ သရုပျဆောငျ ဥက်ကာမငျးမောငျ ကတော့ ဇာတျကားတှလေညျး ရိုကျကူးထား တာဖွဈပွီး လကျရှိမှာတော့ New York မှာ အခွခေနြထေိုငျနတောပဲ ဖွဈပါတယျ..။အနုပညာ အလုပျတှရေပျနား ထားပမေယျ့လညျး ပရိသတျတှေ ဆကျလကျ အားပေး ခဈြခငျနကွေတဲ့ ဥက်ကာမငျးမောငျ ကတော့ ဝါသနာပါတဲ့ အိပျမကျတှထေဲက တဈခုအကောငျအထညျ ဖျောဖို့အတှကျ လမျးသဈတဈခုကို လြှောကျလှမျးနေ တဲ့အကွောငျး ပွောပွလာတာ ဖွဈပါတယျ..။
ဥက်ကာမငျးမောငျ ကတော့ Music နဲ့ ပတျသတျရငျ အကောငျးဆုံးကြောငျးတှေ ထဲကတခုဖွဈတဲ့ New York က သူ အရမျးတကျခငျြတဲ့ SAE institute မှာ Audio Engineering degree တကျဖို့ ကြောငျးဝငျခှငျ့ရပွီး အစစအရာရာ အဆငျပွစှောနဲ့ စတကျလို့ရပွီဖွဈတဲ့အကွောငျး ပွောပွလာတာပါ..။မသခေငျမှာ ဖွဈခငျြတာတှနေဲ့ ဝါသနာ ပါတာတှကေို အကုနျဖနျတီးယူသှားနိုငျတဲ့ လူတဈယောကျဖွဈခငျြသလို ဝါသနာပါတာကို လလေ့ာ သငျယူရမှာကွောငျ့ အရမျး စိတျလှုပျရှားတဲ့အကွောငျးကိုလညျး ပွောပွထား ပါသေးတယျ..။
“New York က Music နဲ့ပတျသတျရငျ အကောငျးဆုံး ကြောငျးတှထေဲကတခု ဖွဈတဲ့ SAE institute မှာ Audio Engineering degree တကျဖို့ ကြောငျးဝငျခှငျ့ရပွီး အစစအရာရာ အဆငျပွစှောနဲ့ စတကျလို့ရပါပွီ.. ကမ်ဘာ့နိုငျငံပေါငျးမြားစှာမှာလညျး ဒီကြောငျးရှိပါတယျ.. အရမျးတကျခငျြနခေဲ့သော ကြောငျး တခြိနျက ကွိုးစား ခဲ့ပမေယျ့ အကွောငျးကွောငျးပေါငျးမြားစှာနဲ့ အဆငျမပွခေဲ့ဘူး.. ဒီလိုနဲ့ပဲ နှဈတှကွော.. အခုကတြော့လဲ ခြောခြောမောမောပဲ အဆငျပွသှေားတယျ.. ကိုယျ့အလုပျခြိနျတှေ နဲ့လဲ လှတျတယျ..
ဟိုးအရငျ green card မရခငျ international student အနနေဲ့ကြှနျတျောလညျး ကြောငျး လခက အပွညျ့ပေးရတာ မတတျနိုငျဘူးလေ.. အဲ့အခြိနျ မိဘက ပိုကျဆံထုတျပေးခဲ့တာဆိုတော့လဲ သူတို့တကျစခေငျြခဲ့တဲ့ Business management major ပဲတကျခဲ့ပွီးဘှဲ့ရခဲ့တာ.. ကို ယျ ဝါသနာပါတာကို မတကျ ခဲ့ရဘူး.. US citizen နဲ့ permanant resident တှအေတှကျကကြောငျးလခက international student အနနေဲ့ယှဉျရငျ အမြားကွီး သကျသာသလို financial aid လညျး လြှောကျလို့ရတယျ..
အခုတော့ ကိုယျဝါသနာပါ တာလေးကို လလေ့ာ သငျယူရမှာဆိုတော့ အရမျး excited ဖွဈတယျ..DJ တဈယောကျလညျး ဖွဈခငျြတယျ.. ဘဝ မှာ မသခေငျ ကိုယျဖွဈခငျြတာတှေ ကိုယျဝါသနာ ပါတာတှကေို အကုနျ ဖနျတီးယူသှားတဲ့ လူတဈယောကျလညျး ဖွဈခဲ့ခငျြသေးတယျ.. အိပျမကျတှေ ထဲက အိမျမကျတခု အကောငျ အထညျဖျောဖို့ အတှကျ လမျးသဈလေးတခု စလြှောကျခွငျး နိဒါနျးပေါ့…” ဆိုပွီး ဥက်ကာမငျးမောငျက ပွောပွထားတာပါ..။
ရခိုင်ပြည်နယ်သို့ အဓိဌာန်ဝင်ရန် ရောက်ရှိနေပြီး နဂါးစာကျွေးရင်း ခုနှစ်ရက်သားသမီးများအတွက် ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သပေးခဲ့တဲ့ ခိုင်နှင်းဝေ
ဒီကနေ့ ဧပြီလ၂၂ရက် မနက်ပိုင်းမှာ မန္တလေးက မြရည်နန္ဒာအိမ်ရာမှာ ရဲနဲ့စစ်တပ် အင်အားအပြည့်နဲ့ ၀င်ရောက်ရှာဖွေခြင်းခံရတဲ့ အေးဝတ်ရည်သောင်း